Anaran-tranonkala | WordPress.org Malagasy
Noho ny antony samihafa mifamatotra amin'ny marika ara-barotry ny WordPress, dia angatahina ianao raha hanangana tranonkala momba ny WordPress ma tsy hampiasa ny teny hoe “WordPress” amin'ny anaran-tranonkalanao. Azonao andramana ampiasaina kosa ohatra ny teny hoe “wp” na endri-panoratana hafa. Tsy mpisolovava izahay nefa kosa ireo mpisolovava mahay no mamporisika ny hampiharana an'io mba ho fiarovana ny marikantsika. Maro koa mantsy ireo mpampiasa tranonkala no efa naneho fa mety hahafanina mantsy.
Raha sanatria efa mampiasa anaran-tranonkala misy hoe “WordPress” ianao, dia tokony hamindra izany amina anaran-tranonkala mampiasa ohatra hoe “wp” mandrapahazatra ireo "moteurs de recherche". Rehefa vita izany dia tokony hihevitra hamindra izany ho amin'ny Fondation WordPress ianao.
Tsy olana ny teny hoe “WordPress” any amin'ny anarana zana-tranonkala, toy ny hoe wordpress.example.com, ny amin'ny anaran-tranonkala fototra ihany no tena manahirana.
Efa voalaza tamin'ireo nanontany azy io, fa nozaraina ampahibemaso mba ahafantaran'ny maro io politika io.
<whine>Misy anaran-tranonkala sasany hafa mampiasa ny teny hoe WordPress!</whine>
Raha tsy WordPress.com, WordPress.net, WordPress.org, WordPress.tv, na WordPressFoundation.org izy dia tsy nahazoana alalana, ary tokony handefa fampilazana ho an'ilay tompon'ny tranonkala ianao manome azy rohy ho amin'ity pejy ity. Matetika dia tranonkala mpanao spam sy mpizara plugins sy bika misy biby ireny, ka azo antoka fa tsy tianao ny hiara-hiasa aminy.